Ampidino Security Rindrambaiko ho an'ny Windows
Ampidino Security Rindrambaiko
Miaraka aminny kinova Avira Premium Security Suite vaovao, manova ny anarany ho Avira Internet Security izy io. Avira Internet Security, izay nohavaozina ny endriny interface, dia azo apetraka aminny tsindry 2 fotsiny. Miaraka aminny rindrambaiko izay misy karazana sivana an-tserasera rehetra momba ny fahalalahana aminny Internet,...
Mahatsiaro ho voaro ianao rehefa mampiasa solosaina. Ary ahoana rehefa mifandray aminny Internet? Raha mitady programa fiarovana izay hiaro anao hatrany aminny fandrahonana farany aminny Internet ianao, Norton Internet Securityvirus dia samy miaro ny solo-sainao sy miaro ny solo-sainao aminny alàlanny fiasana tsy tapaka any ambadika any...
Norton AntiVirus dia programa vahaolana fiarovana voarindra sy matihanina izay manome fiarovana mandroso aminny viriosy, spyware, raha fintinina, ny programa sy rakitra rehetra mety hanimba ny solosainao. Raha te hiaro tanteraka ny solosainanao ianao ary mitazona lozisialy maloto izay mitarika risika fiarovana tsy ho lavitra ny rafitrao,...
Anvi Smart Defender miaro aminny fomba tsy manam-paharoa sy mahery ny solosainao aminny Trojans, adware, spyware, bot, virus ary rindrambaiko maloto hafa. Noho ny fisavana fikarohana anity programa ity dia afaka mahita sy manaisotra mora foana ireo mpampiasa izany ary manaisotra izany fandrahonana izany. Ankoatrizay, miaraka aminny Anvi...
TrojanHunter dia programa fanesorana viriosy izay manampy anao aminny fanalana viriosy aminny alàlanny fitiliana ireo solosainao ho anny malware. TrojanHunter dia miaraka aminny interface tsotra sy mora azo. Tsy afaka manome sosokevitra anity programa ity ho vahaolana antivirus feno izahay; satria TrojanHunter dia fitaovana natao...
DotVPN dia iray aminireo fanitarana VPN ankafizinny mpampiasa Google Chrome. Mamela antsika hiditra avy aminny firenena 12 manerantany, miaro antsika aminny karazana dokambarotra manimba ny fiainana manokana an-tserasera ny VPN, ao anatinizany ny sora-baventy pop-up sy mibaribary aminny pejy web. Samy mandany vola be aminny fandefasana...
Emsisoft Anti-Malware dia programa iray izay afaka miaro anao aminny rindrambaiko maloto. Ny fanavaozana tsy tapaka ny database dia midika fa afaka mamantatra malware vaovao haingana araka izay tratra. Misaotra ani Emsisoft Anti-Malware, izay manara-maso ireo rindranasa rehetra mihodina ao ambadika toy ny lozisialy antivirus ary mahita...
Na dia afaka mahita fampahalalana mahasoa be dia be aminny Internet aza isika, maro ny tranonkala no lasa fandrika fanaovana dokambarotra androany ary mila miady mafy mitady ny vaovao tadiavintsika isika nefa tsy manindry ny doka. Azoko antoka fa mpampiasa Internet maro, toa ahy, no sahiran-tsaina aminireo sora-baventy dokambarotra izay...
Manintona ny saina aminireo fitaovana tsotra nefa ilaina ho anny Windows, manao asa mitovy aminizany i Carifred ary manampy ny solosaina aminny fampiharana antsoina hoe Ultra Adware Killer. Ity rindranasa ity dia manampy anao hanala ny rindrambaiko Adware manimba ny solosainanao. Raha misy kaonty hafa ao aminny solosaina dia tsy mila...
HMA! PRO VPN (Afeno ny Ass Ass VPN) no programa VPN tsara indrindra sy haingana indrindra, manolotra tamba-jotra mpizara VPN lehibe indrindra manerantany. Izy io dia iray aminireo programa VPN izay azo ampiasaina hidirana aminireo tranonkala voasakana / voarara, hampiasa serivisy tsy mandeha any Torkia, hiantohana ny filaminanny teboka...
Folder Lock dia rindrambaiko fiarovana rakitra haingana izay afaka manao rakitra voaaro aminny teny miafina, manampy anao manafina tsara ireo rakitra, manafina ny lahatahiry, manafina rakitra, rakitra, sary na antontan-taratasy rehetra, na kapila. Miaraka aminilay programa, izay ahafahanao manome fiarovana tsotra aminny alàlanny...
Ny fampiharana OpenVPN dia loharano malalaka sy fampiharana VPN maimaim-poana izay mety ho tianny olona miaro ny filaminany sy ny fiainany manokana aminny Internet, ary koa ireo izay te hiditra aminireo tranonkala nakatona ho anireo mpampiasa eto aminny firenentsika. Ny programa dia manana serivisy SSL VPN feno tanteraka ary manohana...
Comodo Cloud Antivirus dia azo faritana ho programa antivirus izay manome fiarovana virosy feno ho anireo mpampiasa aminny alàlanny alàlanny herinny fikirakirana rahona ao aoriany. Ity rindrambaiko antivirus ity, izay azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana aminny solo-sainanao, dia manambatra ny hetsika antivirus mahazatra toy ny...
Avira Free Antivirus dia antivirus maimaim-poana ho anireo mpampiasa izay te hiaro ny solo-sainizy ireo aminny viriosy, trojan, mpangalatra, kankana, malware ary maro hafa. Manolotra mpampiasa interface tsara voarindra sy tahiry antivirus havaozina tsy tapaka momba ny fandrahonana farany, ny programa no safidy voalohany ho anireo...
Panda Cloud Cleaner dia programa antivirus mora ampiasaina izay mijerijery aminny Internet ny lozisialy sy ny viriosy mety hanimba ny solosainao, noho ny haitao mandroso. Miaraka aminny Panda Cloud Cleaner, azonao atao ny mamantatra sy manadio mora foana na dia ny rindrambaiko manimba izay tsy hitanny programa virosy nentim-paharazana,...
Miaraka aminny Comodo Internet Security, izay fitambaranny Comodo Firewall, izay hita ho iray aminireo programa firewall tsara indrindra eranizao tontolo izao, ary Comodo Antivirus, izay novolavolaini Comodo ihany koa, tamina programa iray dia tsy mila mandoa vola intsony ianao ho anny filaminanny Internet anao. Raha voaro aminny...
Browsec VPN dia programa VPN izay nahavita nahazo marika feno avy aminireo mpampiasa fitaovana Google Chrome sy iOS. Ny add-on VPN maimaim-poana, izay ahafahanao mampifandray saika aminny toerana 9 manerana anizao tontolo izao ary lasa mpikambana ao aminny tranokala tsy azo idirana isam-paritra, na mifandray tsy misy fotony aminireo...
Comodo AntiVirus miaro hatrany ny solosainanao aminny mety fiparitahanny virus ary manao fanadiovana raha ilaina izany. Tsy ny mamantatra sy mitatitra viriosy fotsiny, ny Comodo AntiVirus dia mifehy ny malware sy ny fampiharana miaraka aminny haitao miavaka ao aminy. Comodo AntiVirus, programa iray izay mety tianny mpampiasa aminny...
Androany, ny fitomboanny isanny serivisy aminny Internet dia manery ny mpampiasa hamorona sy hitadidy tenimiafina betsaka kokoa noho ny taloha. Azoko lazaina fa saika tsy azo atao ny mahatadidy ireo anarana mpampiasa sy teny miafinny serivisy am-polony maro samihafa, manomboka aminny tamba-jotra sosialy ka hatraminny kaonty aminny banky...
Windows Password Cracker dia rindrambaiko iray ahafahanao mamerina ny tenimiafinao Windows hadino. Azonao atao ny mahazo zava-dehibe aminny Windows Password Cracker, izay ahafahanao mamoaka ny teny miafinao indray. Raha hadinonao ny teny miafinny herinao eo aminny solosainao, dia manampy anao i Windows Password Kracker. Miaraka aminny...
Ny programa IObit Malware Fighter Free dia iray aminireo safidy malalaka tadiavinireo mpampiasa te-hiaro ny solosainizy ireo aminny fandrahonana malware, ary azoko lazaina fa iray aminireo fampiharana izay manao ny asany tsara indrindra izy io. Ilay programa, izay novokarina ho vahaolana hanoherana ny fametrahana tsindraindray ireo...
Tencent PC Manager dia programa antivirus izay manome ny mpampiasa fitaovana fiarovana mora ampiasaina ho fiarovana ny viriosy. Ity programa antivirus maimaimpoana ity, izay manana fikirakirana fametrahana mora, dia fitaovana azonao ampiasaina raha tianao ny hisorohana ny fidiranny viriosy aminny solosainao. Trojan, kankana, rootkit ary...
Surf Anonymous Free dia rindrambaiko fiarovana maimaimpoana novolavolaina ho anireo mpampiasa internet izay maniry hitarika ny hetsika an-tserasera rehetra am-pilaminana sy manokana. Noho ny programa dia azonao atao ny miaro ny angon-drakitrao manokana aminny fanovana ny adiresy IP anao, ary koa manana ny fahafaha-miditra aminireo...
EasyLock dia programa fanaingoana rakitra izay azo ampiasaina aminny kinova Windows. Na ho anny mpampiasa an-trano na ho anny orinasa, ny encryption dia fepetra takiana aminny fiarovana data. Natao ho anny filaminana tsara indrindra, EasyLock dia azo faritana toy ny vahaolana fanafenana ampiasaina mba hiarovana angona...
EMCO Malware Destroyer dia programa fanesorana viriosy maimaim-poana azonao ampiasaina hialana aminny malware izay niditra an-tsokosoko taminny solo-sainanao. Ny fiasa manandanja indrindra aminny programa dia ny ahafahany mi-scan haingana be. Noho io fiasa io dia azonao atao ny mamantatra sy mamafa ireo viriosy ao aminny rafitranao ao...
Avast Ultimate dia ny fiarovana rehetra, ny tsiambaratelo ary ny sehatra fampisehoana ho anireo mpampiasa Windows PC. Izy io dia manambatra fampiharana premium 4 aminny toerana iray: Avast Premier, izay manome fiarovana faranizay betsaka, Avast Cleanup Premium, fitaovana fanadiovana kapila sy haingam-pandeha, Avast SecureLine VPN, izay...
Radmin VPN dia programa VPN azonao ampiasaina hamoronana tambajotra virtoaly tsy miankina ho anao. Aminity programa ity, izay azonao ampiasaina aminny fitaovanao aminny rafitra fiasanny Windows, azonao atao ny mampifandray ireo milina lavitra aminny tamba-jotra virtoaly tokana ary mizaha soa aman-tsara ny Internet. Ny tena zava-dehibe...
Ashampoo Spectre Meltdown CPU Checker dia azo faritana ho toy ny fitaovana fitiliana viriosy maimaimpoana izay manampy anao hahafantatra raha misy fiantraikany aminny solosainao ny fahalemenny Meltdown sy ny Spectre izay vao hita. Meltdown sy Spectre dia fahalemena izay namela ny teny miafinao sy ny fampahalalana saro-pady hangalarina...
Kaspersky Rescue Disk 18 dia fitaovana maimaim-poana azonao ampiasaina hanarenana ny solosainao aminny malware. Miaraka aminity rindranasa ity izay azonao ampiasaina aminny solosainao miaraka aminny rafitra fiasa Windows, azonao atao ny manadinika sy mamono otrikaina ny rafitra x86 sy x64 mifanaraka aminao. Kaspersky Rescue Disk...
InSpectre dia programa fikarohana sy famakafaka novolavolaina hanoherana ny fahalemenny Meltdown sy ny Spectre izay vao nambara tato ho ato. InSpectre, programa fitadiavana fahalemenny fiarovana izay azonao sintonina sy ampiasainao maimaimpoana aminny solo-sainanao, dia mandinika ny fitaovanny solo-sainao ary mitatitra raha tsy voaro...
Nessus dia rindrambaiko fitiliana fahalemena feno. Miaraka aminilay programa izay azonao atao ny mamakafaka ireo fahalemenny fiarovana aminny solo-sainao manokana na aminny andrim-pianaranao dia afaka mahita ny mety ho marefo ianao ary mitandrina. Mijoro miaraka aminireo endri-javatra avo indrindra, Nessus dia afaka manandrana ny...
Kaspersky Safe Kids dia programa Windows azonao isafidianana mifehy ny fampiasana Internet anny ankizy. Ny antsasaky ny fianakaviana izay mampiasa Internet ny zanany dia matahotra sao ny zanany hiditra atiny mampidi-doza aminny Internet, raha ny fahatelo kosa te-hifehy ny fampiasana Internet anny zanany. Kaspersky Labs, izay nandray...
VeePN dia programa VPN haingana, azo antoka ary mora ampiasaina izay miantoka ny fiainana manokana sy filaminana an-tserasera. Izy io dia miaraka aminny endri-javatra mandroso izay mampiakatra ny haavonny filaminana aminny ambaratonga manaraka, toy ny fifandraisana miaraka aminny fitaovana 10, ny fiarovana ny fivoahanny DNS, ny...
Ny plugin Google Password Checkup dia manampy anao hiantoka ny kaontinao aminny fampandrenesana anao avy hatrany rehefa voajirika ianao. Ny fanaraha-maso ny teny miafina, izay azo sintonina sy apetraka aminny alàlanny browser Google Chrome, dia manara-maso ireo tranonkala sy serivisy ampidirinao ary mampitandrina anao raha sendra misy...
Panda Free Antivirus no rindrambaiko antivirus farany nomaninny orinasa Panda, izay malaza aminny fampiharana fiarovana azy io, ary atolotra maimaim-poana aminny mpampiasa rehetra. Ny programa, izay nisy toy ny Panda Cloud Antivirus taloha, dia navoaka ho Panda Free Antivirus ary afaka miaro ny solosainanao aminny fandrahonana farany azo...
AVG AntiVirus Free dia eto miaraka amina kinova vaovao izay tsy dia misy toerana firy ary mampihena ny fampiasana fitadidiana raha oharina aminny kinova taloha. Ny fampifangaroana ny filazanny scanning haingana kokoa aminny fahombiazana tsara kokoa, ny rindrambaiko dia miaraka aminny fanovana lehibe aminny famolavolana interface miaraka...
Rindrambaiko samihafa am-polony maro izay mandrahona ny solosainantsika, toy ny viriosy, kankana, spyware, ary koa malware, dia mety hiteraka vokany lehibe toy ny fahaverezanny data, ny fatiantoka ara-nofo ary ny fitondran-tena, ary sarotra be ho anireo mpampiasa ny manohitra azy rehetra aminny fampiasana antivirus iray ihany. Satria na...
Avast Free Antivirus, izay manolotra rafitra fiarovana viriosy maimaimpoana ho anireo solosaina nampiasainay tao an-tranonay sy tany am-piasana nandritra ny taona maro, dia novolavolaina sy havaozina manoloana ny fandrahonana virtoaly. Ny solosaina rehetra mampiasa Internet, ao anaty tamba-jotra na dia tsy mifandray aminny Internet aza,...
ESET NOD32 Antivirus 2021 dia programa antivirus mandroso izay miaro aminny hackers, ransomware ary phishing. Mampiavaka azy aminny programa antivirus nentin-drazana hafa izy io satria miaro aminny karazana malware rehetra, ao anatinizany ny viriosy, kankana, spyware, ransomware, ary mitazona fiarovana ambony noho ny tena izy nefa tsy...
AdwCleaner dia vahaolana fiarovana matanjaka sy mandroso izay miaro ny mpampiasa solosaina aminny lozisialy maloto mivezivezy aminny Internet. Raha tsy mampiasa programa antivirus aminny solosainao ianao, dia ilaina ny scan ny solo-sainanao raha misy malware aminny alàlanny fanaraha-maso miaraka aminny fanampianny AdwCleaner indraindray....
Free Hide IP dia programa fiarovana aminny fiainana manokana aminny Internet izay ahafahanao manafina ny adiresy IP-nao rehefa mizaha Internet sy mankafy Internet maimaimpoana nefa tsy manahy ny momba ny maha-izy anao. Miaraka aminny Free Hide IP, izay ho iray aminireo mpanampy lehibe anao hialana aminny hetsika toy ny halatra...
Kaspersky Total Security no efitrano fiarovana avo lenta indrindra. Fiarovana ny ankohonana marobe miaraka aminny antivirus, fiarovana ransomware, fiarovana webcam, mpitantana teny miafina, VPN ary teknolojia 87, ao anaty lisansa iray daholo. Ampidino izao Kaspersky Total Security 2021 mba hiarovana ny ankohonanao sy ny zanakao aminny...
Ny Kaspersky Internet Security 2021 dia manome fiarovana avo lenta aminny viriosy, kankana, spyware, ransomware ary fandrahonana iraisana iraisana. Ary koa, aminny Kaspersky VPN, manafina ny hetsika ataonao ianao, ary mitazona ny sarinao, ny hafatrao ary ny fampahalalana momba ny banky tsy ho tratranireo mpijirika. Ny fanandramana...
360 Total Security dia rindrambaiko antivirus izay manolotra ny fiarovana aminny virus feno ho anireo solosainizy ireo, miaraka aminireo fiasa fanampiny ilaina toy ny fanafainganana ny solosaina sy ny fanadiovana rakitra tsy misy dikany. Azonao atao ny miditra aminny kinova premium anny 360 Total Security aminny alàlanny rohy etsy...
Kaspersky Anti-Virus 2017 dia iray aminireo programa antivirus tsara indrindra ho anny mpampiasa Windows PC ankehitriny, miaraka aminny fandrahonana an-tserasera mitombo. Mandinika ny rafitra tsy miovaova izy io mba hiarovana anao aminireo viriosy farany, trojan, malware ary fandrahonana hafa, eny fa na dia mitety tambajotra sosialy,...
Comodo Hijack Cleaner, rindrambaiko azonao ampiasaina hiarovana ny tenanao aminireo doka voanny virus na atiny hafa misokatra aminny tranokala aminny Internet, dia manampy aminny fahombiazanao sy ny fiarovana anao aminny fitazonana ny rafitrao hilamina. Manohana ireo mpitsangatsangana Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer,...
Aminny alàlanny fampidinana Kaspersky Security Cloud 2021 dia mahazo ny programa fiarovana farany ambony ani Kaspersky ianao. Kaspersky Security Cloud, programa fiarovana Adaptive voalohany, misy ny Security Internet (Internet Security), Secure Connection (VPN), Password Manager (Password Manager), Security Live (Live Security), My Apps...
Inona no atao hoe Tor Browser? Tor Browser dia mpizaha Internet azo antoka namboarina ho anireo mpampiasa solosaina izay miahy ny filaminany an-tserasera sy ny fiainany manokana, hijerena an-tsokosoko Internet aminny fomba tsy fantatra anarana ary hamakivaky aminny fanesorana ireo vato misakana rehetra eto aminny tontolonny internet. ...